Imisa Milyan oo taageere ayaa ku soo biiray kooxda Juventus tan iyo markii uu Ronaldo yimid? (daraasad la sameeyay) – Gool FM
(Turin) 18 Feb 2019. Tan iyo markii uu Cristiano Ronaldo yimid kooxda Juventus ee Talyaaniga xagaagii hore waxaa uu laacibkani saameyn weyn ku yeeshay naadigiisa iyo guud ahaan Horyaalka Talyaaniga.
Inkastoo kooxaha iyo ciyaartoyduba la qiimeeyo marka uu horyaalku dhammaado, haddana waxqabadka CR7 ayaa muuqda, isagoo Juventus u dhaliyay 21 gool, halka 8 kalena uu ku caawiyay saaxiibadiis, taasoo ka dhigan inuu si toos ah uga qayb qaatay 55% goolaha Juventus ee xilli ciyaareedkan.
Shaki kuma jiro in Ronaldo uu saameyn ballaaran ku yeeshay safka uu hoggaamiyo tababare Massimiliano Allegri, iyadoo ay si fiican isu fahmeen Paulo Dybala iyo Joao Cancelo iyo guud ahaan xiddigaha kooxda.
Waxaa intaa dheer in dhaliyihii hore ee Manchester United iyo Real Madrid uu qayb libaax ka qaatay sare u kicidda magaca iyo qiimaha Juventus.
Daraasad ay sameysay Juventus ayaa waxa ay ku ogaatay in taageerayaashii kooxda ee dhanka baraha bulshada (Social Media) ay sare u kacdeen wixii ka dambeeyay markii uu Marwada cajuusada ah ku soo biiray Cristiano Ronaldo.
Daraasaddu waxay sheegaysaa in taageerayaasha Juventus ee dhanka Internet-ku sare u kaceen 30% iyadoo 16 milyan oo taageerayaal cusub ah ay kooxda ku soo biireen.
Kanaalka Youtube-ka ee Juventus ayaa 136% sare u kacay, halka Instagram-ka Juventus illaa 10 milyan oo taageerayaal ah ay ku darsantay.
Twitter-ka naadiga Juventus ayaa isna 10.7% sare u kacay, taasoo la mid ah illaa 600,000 oo raacdayaal cusub ah (followers), iyadoo 3 milyan oo taageerayaal cusub ahna ay ku soo kordheen bogga Facebook ee Bianconeri oo haatan maraya 36,840,020 taagerayaal ah.
Dhanka kale waxaa sare u kacay taaaageerayaasha guud ee horyaalka Talyaaniga illaa 2.3% laga soo billaabo markii Ronaldo ay soo iibsatay Juventus, halka taageerayaasha Juventusna ay kobceen 4.54%.
Waxaa kaloo iyana la xaqiijiyay in taageerayaasha kooxdii uu Ronaldo ka soo tegay ee Real Madrid ay iyagana hoos u dheceen iyadoo garoonka Santiago Bernabeu oo ay soo xaadiri jireen 65,027 oo taageere ay tiradaasi degtay oo ay noqotay 62,340 taageereyaal ah, sida lagu qoray wargeyska ‘Marca’ ee ka soo baxa Spain.
Feeryahanka Muslimka ah ee Mike Tyson oo intuu bani’aadamka soo dhaafay doonay inuu xayawaanla dagaallamo